Essential Tools - Myanmar Real Estate Exchange
မြေဧက ဘယ်လိုတွက်ရသလဲ ခဏခဏ မေးလာလို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းလင်းအောင် တွက်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိမိမြေကွက်၏ ပုံသဏ္ဍန်ကိုကြည့်၍ ဧက တွက်နိုင်ပါသည်။၁။ လေးနားညီ စတုရန်းပုံစံ ဖြစ်ပါက၂၀၈.၇၁' × ၂၀၈.၇၁' = ၄၃၅၅၉.၈၆ = ၁ ဧကဥပမာ ~~~~၁၀၀ ပေ ပတ်လည်အကွက် ဖြစ်လျင်၁၀၀' × ၁၀၀' ÷ ၄၃၅၆၀=၀. ၂၂၉ ဧက၂။ နှစ်နားညီ စတုဂံပုံစံ ဖြစ်လျှင်(လ x န)' ÷ ၄၃၅၆၀ = _...
မေး။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်ခြံထဲမှာ မနေနိုင်လို့ အခြား လူတစ်ဦးကို အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုထားတာ ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ ။ တချို့သူတွေက ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဟာ သူ့အိမ် ဒါမှမဟုတ် သူ့မြေကွက်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အခမဲ့နေထိုင် ခွင့်ပြုထားတာ ၊ ကာလရှည်ငှားရမ်းထားတာ ၁၂ နှစ်ကျော်ရင် ဖယ်ရှားလို့ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေရှိသလိုလို ၊ စီရင်ထုံး ရှိသလိုလို ပြောဆိ...
* ၃ထပ်ခွဲ အောက် ဆောက်လုပ်ခြင်း (အထပ်နိမ့်)၁. ဘေးအိမ်(ဘယ်/ညာ) လက်မှတ်၂. ရပ်ကွက် ရုံးလက်မှတ်၃. အင်ဂျင်နီယာ (လိုင်စင်စု) လက်မှတ်၄. မြေခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်(မြို့နယ်YCDC မှာလုပ်ရန်)၅. အိမ်ဆောက်ရန် မြေပုံကူးယူခြင်း (မြို ့တော်ခန်းမတွင်လုပ်ရန်)၆. Structure Drawing (A1 Size သုံးစုံ)* ၃ထပ်ခွဲ အထက် ဆောက်လုပ်ခြင်း၁. ဘေးအိမ်(ဘယ်...
General Power of Attorney vs Special power of Attorney (Special Power) ဆိုသည်မှာ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျ၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်၊ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန၊ စာရွက်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဌာနနှင့် ရုံးဌာနအသီးသီးမှာ တရားဝင် ငှားရမ်းရန်၊ ပေးကမ်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆို...
Home Cooking Fire Prevention TipsCooking is the leading cause of home fires and fire injuries. Ranges or cook tops cause 62% of home fires according to the National Fire Protection Association. Learn how to stay safe with these tips. -Keep anything that can catch fire away from your stove top.- Always unplug counter top all...
Freehold Land Freehold land can be interpreted into Myanmar language as "ancestral land". Ownership of such land is conclusive and the owner is not required to pay land revenue with regard to it. It is transferable to desired citizens and can only be taken back by the government, for State interest, and in accordance with the ‘L...
10 things to be aware before sending emailsသတိထားရမယ့် လုပ်ငန်းခွင် Email ယဉ်ကျေးမှု ၁၀ ခုတိကျပြတ်သားတဲ့ Email အကြောင်းအရာဖြင့် စတင်ပါ။အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အထက်လူကြီးကို email ပို့ရင် သူတို့ inbox ထဲမှာ email တွေလျှံနေမှာပဲ ဆိုတာ သတိရပါ။ ကိုယ့် email ကို မြန်မြန် အာရုံစိုက်စေချင်ရင်တော့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်ကို သ...
ယနေ့ခေတ်မှာ ရောင်စုံမျက်နှာကျက်တွေ ဗီဒိုအကန့်တွေကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော တည်ဆောက်မှုတွေက ခေတ်မမှီတော့ပါဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းများကသာ တကယ်ခေတ်မှီတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် တိုက်ခန်းဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်တွေက ခေတ်မှီပြီး ဘယ်လိုဒီဇိုင်းတွေက ခေတ်နောက်ကျနေပြီလဲ...
The determination ofaperson’s net worth is from calculating the total amount of property they own and then subtracting any liabilities or debts. Property calculations for one’s net worth include any real estate, vehicles, jewelry, stocks, bonds and anything inasavings or retirement account. When calculating net worth, one do...
Finding housing in Yangon can beadispiriting task, but the market is beginning to work in tenants’ favour – and our handy tips can help you avoid some basic mistakes.By OLIVER SLOW | FRONTIERFOR THOSE going through the arduous task of apartment hunting in Yangon, take some solace from the fact that the entire exercise isadam...
Findingahouse can be extremely difficult in Myanmar, so many potential homeowners are opting to buyacondo or an apartment unit instead. Perhaps even more difficult than buyingaquality house, there can also be many challenges with buyingagood apartment. Ensure that you get your own real estate agent—someone who will repre...
Real estate is booming in Myanmar, which leaves many investors and potential homeowners wondering if they should buy now, or wait until later. In many parts of Myanmar it can be surprising at how expensive property has increased over the past couple of years. For instance, property in Yangon is some of the most expensive i...
Are you getting your condominium or landed house in Myanmar ready to list for sale? This can be one of the most exciting times of your life—you’re moving toadifferent part of the city, gettingabigger home to startafamily, or startinganew job on the other side of Burma.When you’re sellingaproperty you want to get a...
Property buyers in the Myanmar, Burma market may be finding it increasingly difficult to find affordable property in their price range. In this highly competitive market you want to purchase the best property within your budget, and avoid paying more than your fair share of home prices. If you can leverage your funds, you c...
Checklist for BuyingaHouse in Myanmar
Are you planning to buyanew house? Buyinganew house isabig decision as it involvedahuge amount of finances purchasing the property which makes itahighly significant decision to make.It isatough decision consisting of stress as well as excitement at the same time. While the decision of which house suits you compl...
အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power) တွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သတိထားသင့်၊ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တချို့က ပြောပါတယ်။အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာမှာ တချို့ ဝယ်လက်တွေက အခွန်ရှောင်ချင်တဲ့အခါမှာ အရောင်းအဝယ...
အရောင်းအဝယ် ဖြစ်တဲ့အခါ ပထစဆုံးချုပ်ဆိုတဲ့ စရန်စာချုပ်မှာ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူကြား မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ အချက်က ရောင်းသူဘက်က ပေးလျော်ရမယ့် စရန်ငွေ၏ နှစ်ဆဆိုတဲ့ အချက်ကို ရှင်းလင်းအောင် ရေးသားသင့်တယ်လို. သိရပါတယ်။အများစုကတော့ အလွယ်တကူ စာချုပ်ထဲမှာ ရောင်းသူဘက်က ပျက်ကွက်ရင် စရန်ငွေ၏ နှစ်ဆကိို ပေးလျော်ရမယ်၊ ဝယ်သူဘက်က ပျက်ကွက်ရင် စရန်ငွေ အဆုံး...
စရန်ငွေသွားပေးပေမဲ့ ပိုင်ရှင်တွေက အိမ်မှာမရှိဘဲ သော့ခတ်ထားတာကြောင့် ဦးမောင်မောင်အေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ ဖြစ်နေတယ်။ သည်နေ့ ငွေပေးဖို့ စရန်စာချုပ်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် နောက်နေ့ကူးရင် သူပေးထားတဲ့ ငွေတွေဆုံးမှာပါ။ ထူပူပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ပင်တော့ ရပ်ကွက်ရုံးမှာ ကိုယ်ငွေလာပေးတာကို သက်သေအဖြစ် လက်ခံပ...
သင့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံထဲမှာ အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပြီလား။ အိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်မှန်းထားတဲ့အိမ်မျိုးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားရတာ ရှုပ်ထွေးပြီး ခေါင်းခဲနေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ဝယ်တော့ မယ်ဆိုရင် သိသင့်ရမယ့်အချက်တွေကို ကြိုတင်လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုး ခေါင်းခဲနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပ...
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်မှာလား ရောင်းမှာလား ဒါတွေသိထားပါ
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ရောင်းသူရော၊ ဝယ်သူပါ သေချာတိကျအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတချို့ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။ ဝယ်သူ- စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံ မပြည့်စုံ စစ်ဆေးပါ။- အမည်ပေါက်မဟုတ်ရင် ပိုပြီးသေချာ စီစစ်ပါ။- မိတ္တူမှန်၊ ဂရန်မိတ္တူဘက်ခြမ်းတို့ဆိုရင် ဌာနတွေမှာ သေချာစစ်ဆေးပါ။- အမည်ပေါက်ရှိရင် တိုက...